XOG: Col. Cabdallaahi Dheere oo lagu eedeeyey Duqeymo lagu laayey dad shacab ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 29 January 2021
Duqeymo lagu laayey dad shacab ahaa oo ka dhacey gobolada Shabeelaha Hoose iyo Baay oo la ogaadey saraakiisha masuulka ka ahaa.
Saraakiil katirsan sirdoonka soomaaliya oo magacooda qariyey ayaa kashifey in sarkaal katirsan Hay’ada NISA uu ka danbeeyey Duqeymo lagu laayey dad Shacab ahaa isagoo si ulakac ah amar ugu bixiyey in la duqeeyo sida ay sheegeen saraakiishan.
Dhacdada koobaad; Gaari Bus ah oo marayey duleedka Degmada Afgooye oo ay saarnaayeen Dad shacab ah ayaa gantaal lagu dhuftey waxaana lasheegey in amarkaasi uu bixiyey Teliyaha Hogaanka Dabagalka NISA Col. Cabdallahi Dheere.
Dhacdada labaad ayaa kadhacdey Deegaanka Buula-Fulaay ee Gobolka Baay kadib markii laduqeeyey madaraso Dugsi Quraan oo halkaasi ku taaley waxaana lasheegey in ay ku dhinteen ku dhowaad 17 Caruur ah iyo macalin kooda waxaana ku dhaawacmay 23 Ruux oo isugu jira curuur iyo dad waaweyn sida aan ka kasoo xiganey saraakiil katirsan wardoonka soomaaliya.
Dhacdada Seddaxaad ayaa lasheegey in ay ka dhacdey Degmada Kurtunwaarey oo katirsan Gobolka Shabeelaha Hoose kadib markii la Duqeeyey Dugsi Hoose\_Dhexe oo kuyaaley Degmadaas iyadoo ay waxyeelo kasoo gaartey inta badan ardadii iyo macalimiintii Iskuulkaas.
Dhamaan dhacdooyinkan ayaa lasheegey in uu masuul ka ahaa Col. Dheere waxaana lagu eedeeyey in uu ku adkeystey in laduqeeyo goobahan isagoo kadhaga fureystey xogihii (macaluumaadkii) rasmiga ahaa ee ay siinayeen saraakiisha hageysey howlgaladaasi.
Sarkaalkan ayaa lasheegey in uu kutagrifal awoodeed sameeyo wuxuuna inta badan caburiyaa saraakiisha lashaqeysa sida sheegayaan saraakiil ku dhow dhow.
Weli majiro masuul loo ciqaabay dhacdooyinka xanuunka badan waxaana waxaana weli shaqadiisa wata sarkaalkan.